၂၀၁၈ မှာ ပျိုမေတို့အတွက် ရေပန်းစားလာမယ့် နှုတ်ခမ်းနီအရောင် ၅မျိုး -
၂၀၁၈ မှာ ပျိုမေတို့အတွက် ရေပန်းစားလာမယ့် နှုတ်ခမ်းနီအရောင် ၅မျိုး
ခေတ်ရေစီးကြောင်းတွေက တစ်နှစ်နဲ့တစ်နှစ်မတူညီကြဘူး။ ခေတ်ရေစီးကြောင်းကွဲပြားတာနဲ့အမျှ ဖက်ရှင်တွေ၊ မိတ်ကပ်တွေနဲ့လူနေမှုပုံစံတွေကလည်းကွဲပြားလာကြတယ်။ ဒါပေမယ့်ဒီ ၂၀၁၈ခုနှစ်မှာတော့ ပျိုမေတို့ကြားထဲမှာ ရေပန်းစားလာမယ့် နှုတ်ခမ်းနီ၅မျိုးအကြောင်းပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
၁။ Glossy Lips
၂၀၁၇မှာတော့ Matte Lipstick Trend က ပျိုမေတွေအပေါ်မှာ စိုးမိုးခဲ့ပါတယ်။ ၂၀၁၈ပြောင်းလာတဲ့အချိန်မှာတော့ Rihanna ရဲ့ Fenty Makeup Products ကို တစ်ကမ္ဘာလုံးက ပရိတ်သတ်တွေအားလုံးကို ချပြလိုက်တဲ့အတွက် Glass Lip လို့ခေါ်တဲ့ Gloss ပုံစံလေးတွေတစ်ပြန်ခတ်စားလာမှာဖြစ်ပါတယ်။
၂။ Tinted Lips
ပျိုမေလေးတွေ နှုတ်ခမ်းနီကိုပိုပြီးတာရှည်ခံစေချင်လာကြတဲ့အတွက် Tinted Lip က၂၀၁၈မှာ ပိုပြီးတပ်မက်လာနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းရပါတယ်။ ၂၀၁၆နောက်ပိုင်း ထုတ်လာတဲ့ Tint Lipstick တွေမှာ နှုတ်ခမ်းသားကိုမပျက်စီးစေပဲ နှုတ်ခမ်းလေးကို စိုစိုလေးဖြစ်စေအောင် အာဟာရဖြည့်ပေးအောင်ထုတ်လုပ်လာပါတယ်။ အဲဒီအတွက် မနက်ကဆိုးထားရင်တောင် ညဘက်အထိမပျက်ပဲရှိနေတဲ့အထိ Long Lasting ပေးပါတယ်။
၃။ Cupid’s Bow
Cupid’s Bow ဆိုတာကတော့ Fashion Runway Makeup ကနေ ဆင်းသက်ပြီး စိုးမိုးလာမယ့် နှုတ်ခမ်းနီဆိုးနည်းလေးဖြစ်ပါတယ်။ အရင်ဆုံး ကိုယ်ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ နှုတ်ခမ်းနီအပြည့်ရပါတယ်။ ပြီးတာနဲ့ နှုတ်ခမ်းဖူး ထိပ်နားကို Glitter Liner နဲ့ ကွပ်ရနဲ့ နှုတ်ခမ်းနီဆိုးနည်းလေးဖြစ်ပါတယ်။ Coachella Festival မှာလည်း ဒီနှုတ်ခမ်းနီဆိုးနည်းကိုတွေ့ရှိလာရမှာဖြစ်ပါတယ်။
၄။ Red Hot Lips
နှုတ်ခမ်းနီမှာ အနီရောင်နှုတ်ခမ်းနီကတော့ Queen ပါ။ ဒါပေမယ့်နှုတ်ခမ်းနီ အနီရောင်ကို ဆိုးတဲ့အခါမှာတော့ Cat Eye ပုံစံ (သို့) Smokey Eye ပုံစံ မျက်လုံးပုံစံခြယ်သပြီးမှ ဆိုးကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ၂၀၁၈ မှာတော့ မျက်လုံးမိတ်ကပ်မပါပဲ နှုတ်ခမ်းနီ အနီရောင်ကိုပဲအသားပေးပြီး ဆိုးလာတာကိုတွေ့ရမှဖြစ်ပါတယ်။
၅။ Peach Please
၂၀၁၇အကုန်မှာတော့ နှုတ်ခမ်းနီအရောင်တွေထဲမှာ အသားရောင်နဲ့ အညိုရောင်တွေခေတ်စားခဲ့ပါတယ်။ ၂၀၁၈မှာတော့ မက်မွန်သီးအရောင် နှုတ်ခမ်းနီက ပျိုမေတို့ကြားမှာ စိုးမိုးလာမှာဖြစ်ပါတယ်။ မက်မွန်သီးအရောင် နှုတ်ခမ်းနီလေးတွေက အင်္ကျီပုံစံလဲမရွေးတဲ့အပြင် နေရာဒေသလည်းမရွေးတဲ့အတွက် အိတ်ဆောင်နှုတ်ခမ်းနီအနေနဲ့ထည့်ထားသင့်ပါတယ်။
နှုတ်ခမ်းနီက မိန်းကလေးတွေအတွက် အသက်ဖြစ်ပါတယ်။ နှုတ်ခမ်းလေးဖူးနေပြီး ဆိုးထားတဲ့ နှုတ်ခမ်းနီလေးက လှနေရင် မြင်သူတိုင်းကသဘောကျနေကြမှာအမှန်ပါ။ ၂၀၁၈မှာ ဘယ်လိုအရောင်လေးတွေ ပျိုမေတို့အပေါ်စိုးမိုးနိုင်တယ်ဆိုတာပြောပြပေးပြီးပြီဆိုတော့ အမြန်သာပြေးဝယ်ပြီးဆောင်ထားလိုက်တော့နော်။
၂၀၁၈ မှာ ပြိုမတေို့အတှကျ ရပေနျးစားလာမယျ့ နှုတျခမျးနီအရောငျ ၅မြိုး
ခတျေရစေီးကွောငျးတှကေ တဈနှဈနဲ့တဈနှဈမတူညီကွဘူး။ ခတျေရစေီးကွောငျးကှဲပွားတာနဲ့အမြှ ဖကျရှငျတှေ၊ မိတျကပျတှနေဲ့လူနမှေုပုံစံတှကေလညျးကှဲပွားလာကွတယျ။ ဒါပမေယျ့ဒီ ၂၀၁၈ခုနှဈမှာတော့ ပြိုမတေို့ကွားထဲမှာ ရပေနျးစားလာမယျ့ နှုတျခမျးနီ၅မြိုးအကွောငျးပွောပွပေးသှားမှာဖွဈပါတယျ။
၂၀၁၇မှာတော့ Matte Lipstick Trend က ပြိုမတှေအေပျေါမှာ စိုးမိုးခဲ့ပါတယျ။ ၂၀၁၈ပွောငျးလာတဲ့အခြိနျမှာတော့ Rihanna ရဲ့ Fenty Makeup Products ကို တဈကမ်ဘာလုံးက ပရိတျသတျတှအေားလုံးကို ခပြွလိုကျတဲ့အတှကျ Glass Lip လို့ချေါတဲ့ Gloss ပုံစံလေးတှတေဈပွနျခတျစားလာမှာဖွဈပါတယျ။
ပြိုမလေေးတှေ နှုတျခမျးနီကိုပိုပွီးတာရှညျခံစခေငျြလာကွတဲ့အတှကျ Tinted Lip က၂၀၁၈မှာ ပိုပွီးတပျမကျလာနိုငျတယျလို့ခနျ့မှနျးရပါတယျ။ ၂၀၁၆နောကျပိုငျး ထုတျလာတဲ့ Tint Lipstick တှမှော နှုတျခမျးသားကိုမပကျြစီးစပေဲ နှုတျခမျးလေးကို စိုစိုလေးဖွဈစအေောငျ အာဟာရဖွညျ့ပေးအောငျထုတျလုပျလာပါတယျ။ အဲဒီအတှကျ မနကျကဆိုးထားရငျတောငျ ညဘကျအထိမပကျြပဲရှိနတေဲ့အထိ Long Lasting ပေးပါတယျ။
Cupid’s Bow ဆိုတာကတော့ Fashion Runway Makeup ကနေ ဆငျးသကျပွီး စိုးမိုးလာမယျ့ နှုတျခမျးနီဆိုးနညျးလေးဖွဈပါတယျ။ အရငျဆုံး ကိုယျကွိုကျနှဈသကျတဲ့ နှုတျခမျးနီအပွညျ့ရပါတယျ။ ပွီးတာနဲ့ နှုတျခမျးဖူး ထိပျနားကို Glitter Liner နဲ့ ကှပျရနဲ့ နှုတျခမျးနီဆိုးနညျးလေးဖွဈပါတယျ။ Coachella Festival မှာလညျး ဒီနှုတျခမျးနီဆိုးနညျးကိုတှရှေိ့လာရမှာဖွဈပါတယျ။
နှုတျခမျးနီမှာ အနီရောငျနှုတျခမျးနီကတော့ Queen ပါ။ ဒါပမေယျ့နှုတျခမျးနီ အနီရောငျကို ဆိုးတဲ့အခါမှာတော့ Cat Eye ပုံစံ (သို့) Smokey Eye ပုံစံ မကျြလုံးပုံစံခွယျသပွီးမှ ဆိုးကွပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ ၂၀၁၈ မှာတော့ မကျြလုံးမိတျကပျမပါပဲ နှုတျခမျးနီ အနီရောငျကိုပဲအသားပေးပွီး ဆိုးလာတာကိုတှရေ့မှဖွဈပါတယျ။
၂၀၁၇အကုနျမှာတော့ နှုတျခမျးနီအရောငျတှထေဲမှာ အသားရောငျနဲ့ အညိုရောငျတှခေတျေစားခဲ့ပါတယျ။ ၂၀၁၈မှာတော့ မကျမှနျသီးအရောငျ နှုတျခမျးနီက ပြိုမတေို့ကွားမှာ စိုးမိုးလာမှာဖွဈပါတယျ။ မကျမှနျသီးအရောငျ နှုတျခမျးနီလေးတှကေ အကငြ်္ီပုံစံလဲမရှေးတဲ့အပွငျ နရောဒသေလညျးမရှေးတဲ့အတှကျ အိတျဆောငျနှုတျခမျးနီအနနေဲ့ထညျ့ထားသငျ့ပါတယျ။
နှုတျခမျးနီက မိနျးကလေးတှအေတှကျ အသကျဖွဈပါတယျ။ နှုတျခမျးလေးဖူးနပွေီး ဆိုးထားတဲ့ နှုတျခမျးနီလေးက လှနရေငျ မွငျသူတိုငျးကသဘောကနြကွေမှာအမှနျပါ။ ၂၀၁၈မှာ ဘယျလိုအရောငျလေးတှေ ပြိုမတေို့အပျေါစိုးမိုးနိုငျတယျဆိုတာပွောပွပေးပွီးပွီဆိုတော့ အမွနျသာပွေးဝယျပွီးဆောငျထားလိုကျတော့နျော။
[ZawGyi] မျက်တောင်တုလေးတွေရွေးတတ်စေဖို့ မျက်ဝန်းလေးတွေပေါ်လွင်လှပစေဖို့ မျက်တောင်တုလေးတွေက အရေးပါတဲ့အခန်းကဏ္ဍကပါဝင်နေပါတယ်။ မျက်တောင်တုဆိုတာကလည်း အရည်အသွေးအမျိုးမျိုး ပုံစံအမျိုးမျိုးရှိတဲ့အပြင် ပွဲတစ်ခုသွားခါနီးမှတွေ့ရာကောက်တတ်လိုက်လို့အဆင်မပြေပြန်ပါဘူး။ ဒါကြောင့် မျက်တောင်တုတပ်မယ်ဆိုရင် ဘာတွေသိသင့်လဲ ကိုယ်နဲ့လိုက်ဖက်တဲ့မျက်တောင်တုတစ်ခုကို ဘယ်လိုရွေးချယ်မလဲဆိုတာ ကြည့်လိုက်ရအောင်။…
Lip Balm ကိုအရေးပေါ်သုံးနိုင်မယ့်နည်းလမ်းများ
Lip Balm ကိုနှုတ်ခမ်းသားတွေလှဖို့အတွက်ပဲ သုံးလို့ရမယ် ထင်နေတာလား။ တချို့သောအရေးပေါ်ကိစ္စတွေအတွက်ပါ Lip Balm ကအသုံးဝင်ပါတယ်နော်။ တကယ်တော့ Lip Balm မှာ Petrolatum လို့ခေါ်တဲ့…
[ZawGyi] သတို့သမီးလေးတွေအတွက် ဆံပင်စတိုင်လ်ရွေးချယ်နည်းများ တစ်သက်မှာ တစ်ခါဆင်နွှဲရတဲ့ မင်္ဂလာပွဲကြီးမှာ အလှဆုံးဖြစ်ချင်ကြတာ မိန်းကလေးတိုင်းရဲ့ စိတ်ဆန္ဒပါပဲနော်။ ဒါကြောင့် အသားအရေလှပဖို့ ၊ ခန္ဓာကိုယ်လှပဖို့ ပြင်ကြဆင်ကြ အဝတ်အစားတွေရွေးချယ်ကြနဲ့…
[Zawgyi] ခရီးသွားချိန် ဘယ်လိုအလှအပပြင်ဆင်မလဲ ခုလို ခရီးသွားရာသီမျိုးမှာ ချစ်ညလေးတို့လည်း ခရီးတွေထွက်ဖို့ စဉ်းစားနေကြမယ်ထင်ပါတယ်။ မိန်းကလေးဆိုတာကတော့ အေးအေးဆေးဆေးပဲ နေနေ၊ခရီးပဲသွားသွား လှနေချင်သူလေးတွေပါပဲနော်။ခရီးသွားရင်လည်း အလှပဂေးလေးဖြစ်အောင်၊ခရီးက ပြန်လာချိန်မှာလည်း ဆိုးဆိုးရွားရွားအသားအရေ…
[ZawGyi] ဆောင်ဂျွန်ကီိကိုအပိုင်သိမ်းနိုင်လိုက်တဲ့ အပျိုကြီးမမအွန်စောရဲ့အလှအပလျှို့ဝှက်ချက်များ ဆောင်ဂျွန်ကီလို သူ့ထက်လေးနှစ်လောက်ငယ်တဲ့ ကောင်လေးချောချောကို ရွှေလက်တွဲနိုင်သွားတဲ့ မင်းသမီးချောလေးအွန်စောကလည်း အလှပဂေးလေးဆိုတာအားလုံးသိကြပါတယ်။ နဂိုလှတဲ့သူမက အရွယ်နဲ့မလိုက်အောင်နုပျိုတဲ့အလှကိုရဖို့ ရိုးရှင်းလွယ်ကူတဲ့နည်းတွေနဲ့ပဲစနစ်တကျထိန်းသိမ်းပါတယ်တဲ့။ မကြာခင်ကပြီးစီးခဲ့တဲ့မင်္ဂလာပွဲမှာလည်း သူမကနည်းနည်းပိန်သွယ်ပြီး အရင်ထက်ပိုလင်းလက်တဲ့အလှတရားကိုပိုင်ဆိုင်ထားတာတွေ့ရပါတယ်။…
[ZawGyi] ရေမချိုးထားရင် ဘယ်လိုမသိသာအောင်နေမလဲ တစ်ခါတလေမှာ မနက်ခင်းစောစောရုံးပြေးရလို့ပဲဖြစ်ဖြစ် အလုပ်တွေဇယ်ဆက်သလိုများနေလို့ ရေမချိုးဖြစ်တာပဲဖြစ်ဖြစ် ဒဏ်ရာအနာတရရှိလို ရေနဲ့ထိဖို့အဆင်မပြေတာပဲဖြစ်ဖြစ် ကြုံလာခဲ့ရင် ဘယ်လိုမွှေးပျံ့အောင်နေမလဲ အနံ့အသက်ကင်းအောင် ဘယ်လိုတွေပြင်ဆင်မလဲဆိုတာမျိုးကို စဉ်းစားကြည့်ရအောင်လား။ ရန်ကုန်မှာက…
[ZawGyi] ဆယ်လူလိုက်အိပ်မက်ဆိုးနဲ့ အယူအဆမှားများ မိန်းကလေးတွေရဲ့ ခြောက်ပစ်ကင်းသဲလဲစင်အလှအပကို နှောက်ယှက်နိုင်တဲ့အရာတွေထဲမှာ ဆယ်လူလိုက်(Cellulite) ဆိုတဲ့အရာကလည်းပါဝင်နေပါတယ်။ ဝင်းမွတ်တဲ့အသားအရေရှိပေမယ့် အထစ်ထစ်လေးတွေလိုရှိနေတတ်တဲ့ ဆယ်လူလိုက်တွေက ပြီးပြည့်စုံတော့မယ့်အလှကိုဝင်ဖျက်လိုက်သလိုပါပဲ။ ဒါကြောင့် ဆယ်လူလိုက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးသိထားကြတဲ့ အယူအဆမှားတွေနဲ့…
ပန်းရောင်နှုတ်ခမ်းကလေးတွေဟာ မိန်းကလေးတွေရဲ့ မျက်နှာအလှအပအတွက် အရေးကြီးတဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအနေနဲ့ပါဝင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ မိန်းကလေးအတော်များများဟာ နှုတ်ခမ်းခြောက်တာ အရောင်မွဲခြောက်ခြောက်ဖြစ်နေတာ၊ နှုတ်ခမ်း အရောင်မမှန်တာတွေဖြစ်လေ့ဖြစ်ထရှိကြပါတယ်။ အဲ့ဒီလို ဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းအရင်းတွေလည်း အများကြီးရှိပါတယ်။ နှုတ်ခမ်းလေးတွေဟာနုနယ်ပြီး ထိရှလွယ်တဲ့အတွက်…
[ZawGyi] ကိုယ်နဲ့လိုက်ဖက်မယ့်မျက်ခုံးပုံစံ ဘယ်လိုရွေးမလဲ မျက်ခုံးပုံစံတကျရှိခြင်း ကိုယ့်မျက်နှာကျနဲ့လိုက်ဖက်တဲ့မျက်ခုံးပုံစံရှိခြင်းက ကိုယ့်မျက်နှာအလှကိုအများကြီးပံ့ပိုးပေးပါတယ်။ မျက်နှာပြဲသူတွေဟာ မျက်ခုံးသေးသေးမျှင်မျှင်တွေနဲ့ မလိုက်ဖက်သလို တချို့တွေကျတော့လည်း ဇင်ယော်တောင်မျက်ခုံးနဲ့ပိုလိုက်တာ လခြမ်းကွေးလိုမျက်ခုံးပုံစံလေးတွေနဲ့ ပိုမိုလိုက်ဖက်တာမျိုးလည်း ရှိကြပါတယ်။ ဒီတော့ကိုယ့်မျက်နှာကျနဲ့လိုက်ဖက်တဲ့…
[ZawGyi] အသားပပ်နေသလား ဒါတွေစား ဆောင်းတွင်းရောက်ရင် နဂိုခြောက်သွေ့တဲ့အသားအရေပိုင်ရှင်တွေအတွက်နဲ့ ပိုမိုရေဓာတ်ခန်းခြောက်ပြီး ယားယံလာတတ်ပါတယ်။ အသားပပ်နေရင် နေရထိုင်ရတာလည်း အဆင်မပြေသလို မိတ်ကပ်လိမ်းလို့လည်း မကောင်းပါဘူး။ ဒီတော့ လှပခြင်းဟာ ကိုယ်ဘာတွေစားသလဲဆိုတာနဲ့…
ဒီနေ့သိသင့်တဲ့ သတင်း ၅ ခု (၃၁.၈.၂၀၁၇)
[Zawgyi] (၁)၂၉ ကြိမ်မြောက် ဆီးဂိမ်းမှာ အိမ်ရှင်မလေးရှားက သူတို့ရဲ့ ဆီးဂိမ်းသမိုင်းတလျှောက် စံချိန်တင် ရွှေတံဆိပ်ဆွတ်ခူးပြီး နိုင်ငံအလိုက်ပထမရရှိသွားပါတယ်။ မြန်မာအသင်းကတော့ နိုင်ငံအလိုက် ဆုတံဆိပ်ရရှိမှုမှာ အဆင့် ၇ သာ ရရှိခဲ့ပါတယ်။ (၂) အမေရိကန်နိုင်ငံ တက္ကဆက်ပြည်နယ်မှာ ဟာရီကိန်းမုန်တိုင်း ဟာဗေးကြောင့် စံချိန်တင်ရေကြီးရေလျှံမှု ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် မုန်တိုင်းအရှိန်ကြောင့် မိုးဆက်လက်ရွာသွန်းနေတဲ့အတွက် ဒီရေကြီးရေလျှံမှုဟာ နောက်ထပ်တစ်ပတ်လောက်ဆက်ရှိနေဦးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ Houston မြို့အပါအဝင်၊ Port Arthur နဲ့ Beaumont မြို့တွေဟာ ရေနှစ်မြုပ်နေခဲ့ပြီး လူနှစ်ဆယ်ကျော်သေဆုံးခဲ့ပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ ဟူစတန်မြို့အာဏာပိုင်တွေဟာလည်း ဒီကိစ္စကြောင့် အရေးပေါ်ညမထွက်ရအမိန့်ကို ညတွင်းချင်း ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ (၃) ဒဂုံမြို့သစ်တောင်ပိုင်းမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ ဆီဘောက်ဆာကားနဲ့ ကွန်တိန်နာကားတိုက်မှုကြောင့် မီးလောင်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့နစ်နာမှုတွေအတွက် […]
How To Techchnology
iPhone မှာ Storage တွေပိုထွက်လာအောင်လုပ်နိုင်တဲ့ အံ့အားသင့်ဖွယ် Trick လေး
iPhone ရဲ့ Storage ဟာ အမြဲတမ်းလို Premium ဆန်နေသလိုပါပဲ။ အထူးသဖြင့် 16GB မော်ဒယ်လိုမျိုး Entry-level မော်ဒယ်မှာဆို ပိုသိသာပါတယ်။ ဖုန်းမှာ App နည်းနည်းသွင်းလိုက်ရုံ၊ ဓာတ်ပုံနည်းနည်း ရိုက်လိုက်ရုံနဲ့ ဖုန်းမှာ “not enough storage” လို့ ပြရင် မခံစားရတဲ့သူ မရှိသလောက်ပါပဲ။ သင့်အနေနဲ့ “Free up space” tips တွေအားလုံးလိုလိုလည်း ကြားဖူးပြီးသား ဖြစ်လောက်မှာပါ။ ဒါပေမယ့် အခုကျွန်တော် ဖော်ပြပေးမယ့် Tips လေးကတော့ သင်မကြားဖူးသေးလောက်ဘူးလို့ ထင်ပါတယ်။ ဖုန်းကို Jailbreak လုပ်ဖို့ မလိုသလို၊ Warranty ပျက်သွားမှာတို့ ဘာတို့လည်း မစိုးရိမ်ရပါဘူး။ ကြိုးစားကြည့်ပြီးတော့ […]
ကွန်ပျူတာမှာ Copy ယူထားတဲ့ စာတွေကို Android မှာ Paste ဘယ်လိုလုပ်မလဲ ?
Phone Hay Ko
[ ZAWGYI ] ကွန်ပျူတာမှာ Copy ယူထားတဲ့ စာတွေကို Android မှာ Paste ဘယ်လိုလုပ်မလဲ ? အကယ်၍ သင်ဟာ ကွန်ပျူတာရော ဖုန်းပါ တစ်ချိန်တည်း ပြိုင်တူသုံးနေရပြီး အလုပ်လုပ်နေရတယ်ဆိုရင် ဒီနည်းလမ်းလေးက သင့်အတွက် အတော်လေး တန်ဖိုးရှိမယ်လို့ဆိုရမှာပါ ။ ဖုန်းနဲ့စာရိုက်ရတာ အားမရလို့ကွန်ပျူတာမှာ Word File ဖွင့်ပြီးရိုက်တယ်။ ရိုက်ပြီးသားစာတွေကို ဖုန်းထဲ ပြန်ထည့်ဖို့ကျပြန်တော့ Word File ကြီးကို ဖုန်းထဲ တစ်ခါပြန်ထည့် ပြန်ဖွင့် Copy ယူနဲ့အတော်ကို အလုပ်ရှုပ်လှပါတယ်။ တစ်ကယ်လို့သာ Word File ဒါမှမဟုတ် ကွန်ပျူတာပေါ်မှာရှိတဲ့မည်သည့်နေရာကနေမဆို လိုချင်တဲ့ စာ(text) တွေကို Copy […]
Google Pixel2နဲ့ Pixel2XL တို့ရဲ့ အချက်အလက်တွေ စတင်ပေါက်ကြားလာ
Google Pixel စမတ်ဖုန်းရဲ့ နောက်မျိုးဆက်သစ်ဖြစ်တဲ့ “Pixel 2” ဖုန်းကို နွေရာသီထဲမှာ ထုတ်ဖော်သွားမယ်လို့ သတင်းတွေထွက်နေပါ။ Google ဟာ ပစ္စည်းသစ်ကို အရွယ်အစားသုံးမျိုးနဲ့ ထုတ်လုပ်သွားမယ်လို့ သိထားပြီး ဆိုက်သစ်တစ်မျိုးအနေနဲ့ အလယ်အလတ်ဆိုက်မော်ဒယ်အတွက် Codename ကို “Muskie” လို့ပေးထားတာပါ။ ဒါပေမယ့် လက်ရှိမှာ Pixel2နဲ့ Pixel2XL အမျိုးအစားတွေရဲ့ Codename တွေကို “Walleye” နဲ့ “Taimen” ဆိုပြီး အသီးသီး ပေးထားပါတယ်။ ဒီအချက်အလက်တွေကို XDA-Developers ကနေ ဖော်ပြခဲ့တာဖြစ်ပြီး သူတို့ကတော့ ယုံကြည်ရတဲ့ အမည်မသိ သတင်း Source ကနေ ပေါက်ကြားလာခဲ့တာဖြစ်ကြောင်း […]
ခုချိန်မှာ ရာသီအကူးအပြောင်း တုပ်ကွေးတွေကလည်း အဖြစ်များပြီး H1N1 ဗိုင်းရပ်စ်ကလည်း ရှိနေပြန်ပြီလို့ အသံကြားရပြန်တော့ ကျန်းမာရေးကိုအရင်ထက်ကိုပိုဂရုစိုက်ရမယ့်အနေအထားပါ။ တကယ်တော့ကိုယ်ခံအား မြင့်မားနေရင် တုပ်ကွေးနဲ့တော်တန်ရုံဗိုင်းရပ်စ်တွေ ၊ ရောဂါပိုးမွှားတွေလောက်ကို ခုခံတိုက်ထုတ်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။ H1N1 ဟာလည်းဒီလိုပါပဲ။ ကိုယ်ခံအားပုံမှန်ရှိနေသူတွေမှာ မပြင်းထန်ပါဘူး။ ကာကွယ်ဆေးလည်းရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။ ဒီတော့ ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ ကိုယ်ခံအားစနစ်ကိုမြှင့်တင်ဖို့ ဒါတွေစားပေးပါ။ ဗီတာမင်စီ ဗီတာမင်စီကြွယ်ဝတဲ့ အသီးအနှံတွေက ကိုယ်ခံအားစနစ်ကိုမြှင့်တင်ပေးပါတယ်။ ဒီတော့ ဗီတာမင်စီကြွယ်ဝတဲ့ အသီးအနှံတွေဖြစ်တဲ့ ဂရိတ်ဖရု ၊ လိမ္မော်သီး ၊ ပျားလိမ္မော် ၊ သံပရာသီး ၊ ရှောက်သီးတွေကို များများစားသုံးပေးသင့်ပါတယ်။ ငရုတ်ပွသီးနီ အချဉ်ဓာတ်ပါတဲ့ အသီးတွေကသာ ဗီတာမင် စီ ကြွယ်ဝတယ်လို့ထင်ရင်မှားသွားပါလိမ့်မယ်။ ငရုတ်ပွသီးအနီမှာ ဒီအသီးအနှံတွေထက် ဗီတာမင် […]
Eminem ရဲ့ သီချင်းကို ယူသုံးလို့ လျော်ကြေးပေးလိုက်ရတဲ့ နယူးဇီလန်အမျိုးသားပါတီ
[Zawgyi] Eminem ရဲ့ သီချင်းကို ယူသုံးလို့ လျော်ကြေးပေးလိုက်ရတဲ့ နယူးဇီလန်အမျိုးသားပါတီ သီချင်းတစ်ပုဒ်ဖန်တီးရတယ်ဆိုတာ လွယ်တာမဟုတ်ပါဘူး။ သံစဉ်ဖွဲ့စည်းမှုကအစ စာသားတွေအဆုံး အားလုံးဟာ စိတ်နှလုံးသားနဲ့ ရင်းရတာတွေပါ။ ဒါကြောင့်လည်း သူတို့ဆီမှာ မူပိုင်ခွင့် (Copyright) ကို အရမ်းကို တန်ဖိုးထားကြတာပါ။ အခုလည်း Eminem ရဲ့ တေးသွားတစ်ပိုင်းတစ်စကို နယူးဇီလန်အမျိုးသားပါတီက ယူသုံးတာ လျော်ကြေးပေးလိုက်ရပြန်ပါတယ်။ ဘယ်သီချင်းကို ကူးတယ်ထင်လဲဗျ။ သူတို့ ကူးတာကလည်း Eminem ရဲ့ လျှမ်းလျှမ်းတောက် “Lose yourself” လေဗျာ။ “You own it, you better never let it go” ဆိုသလိုပဲ Eminem ရဲ့ […]
ဒီနေ့သိသင့်တဲ့ Tech သတင်း ၅ ခု (၂၆.၉.၂၀၁၇)
ဒီနေ့သိသင့်တဲ့ Tech သတင်း ၅ ခု (၂၆.၉.၂၀၁၇) [Zawgyi] (၁) GoPro ကနေ လာမယ့်စက်တင်ဘာ ၂၈ ရက်နေ့မှာ GoPro Hero6Action Camera ကို မိတ်ဆက်မည် GoPro ကနေ လာမယ့်စက်တင်ဘာ ၂၈ ရက်မှာ San Francisco, California မှာ Event တစ်ခုကို ကျင်းပမယ်လို့ ကြေညာထားလိုက်ပါတယ်။ အဲ့ဒီ Event မှာ GoPro Hero6နဲ့ 4K 60fps, Full HD Videos တွေကို Slow Motion 240fps နဲ့ […]
Gmail မှာ Incoming Attachment Size 50MB ထိ တိုးမြှင့်လိုက်ကြောင်း Google ကြေငြာ
Google ဟာ Gmail ရဲ့Incoming Attachment Size ကို 25MB ကနေ 50MB ထိတိုးမြှင့်လိုက်ကြောင်း သိရပါတယ်။ အသုံးပြုသူတွေ အနေနဲ့ အ၀င် File Size ကို လက်ခံတဲ့အခါ 50MB ထိလက်ခံနိုင်မှာဖြစ်ပြီး Incoming MailBox မှာ 50MB ထိရှိတဲ့ ဖိုင်တွဲ ကိုပါ တစ်ပြိုင်တည်းဖွင့်နိုင်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ Email မှာ ဖိုင်တွဲပြီး ပို့တာနဲ့ လက်ခံတာဟာ အရေးကြီးတဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ Google Drive ဟာ အသုံးပြုတဲ့သူတွေ အတွက်အဆင်ပြေအောင် File Size အမျိုးအစား အစုံကို Sharing လုပ်နိုင်တာကို တွေ့ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တစ်ခါတလေ […]
Microsoft ရဲ့ ပထမဆုံး ကိုယ်ပိုင် Desktop Computer အသစ် Surface Studio
Microsoft ရဲ့ ပထမဆုံး ကိုယ်ပိုင် Desktop Computer အသစ် Surface Studio ကောလဟာလတွေ၊ ခန့်မှန်းမှုတွေ၊ ပေါက်ကြားထွက်ပေါ်မှုတွေ လပေါင်းများစွာ ကြာပြီးတဲ့နောက် Microsoft ရဲ့ ပထမဆုံး Desktop PC ဖြစ်တဲ့ Surface Studio ကို ကျွန်တေ်ာတို့ မြင်တွေ့ခွင့်ရပြီဖြစ်ပါတယ်။ iMac နည်းတူ All-in-one PC ဖြစ်တဲ့ Surface Studio ဟာ ပထမဆုံးစမြင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ iMac နဲ့ တော်တော်လေး ဆင်တူတာကို တွေ့ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အတွင်းပိုင်း Spec နဲ့ အခြား Feature တွေရော တူညီပါ့မလား? ကြည့်လိုက်ရအောင်။ Spec ပိုင်းမှာဆိုရင် […]
တကယ်တော့ Singleဆိုတာ ခက်ခဲလှတဲ့ ပျော်စရာကောင်းလှတဲ့ လောကစည်းစိမ်ကို ဘယ်သူ့မှဂရုစိုက်စရာမလိုဘဲနဲ့ တစ်ကိုယ်တော်ဖြတ်သန်းနေကြတာပါ။ သွားချင်တဲ့နေရာကို ဘယ်သူ့မှခွင့်တောင်းစရာမလိုတဲ့ Single ဘဝကို ဘာဖြစ်လို့ ဝင်ရောက်ကြတာလဲဆိုတာ Single အပေါင်းသူတော်ကောင်းတွေကို စစ်တမ်းကောက်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ . . ။ ၁။ အီစီကလီသမား တချို့ Single တွေကျတော့ Facebook မှာဖြစ်ဖြစ်၊ Viber မှာပဲဖြစ်ဖြစ် တွေ့ရင် ဖွန်ကြောင်မယ်၊ ဒါပေမယ့် ရည်းစားမထားချင်ဘူး။ သူ့အနေနဲ့ ရည်းစားထားဖို့ထက် အီစီကလီပြောရတာကို ပိုအားသန်လို့ပါ။ ဒီလို Single တွေကတော့ ဒုနဲ့ဒေးရှိပါတယ်။ ၂။ ရင့်ကျက်လာသူ သူကတော့ ဘာမှနားမလည်ခင်က ရည်းစားတွေ ထားခဲ့ဖူးတယ်။ နားလည်လာတော့ အချစ်မပါတဲ့ Relationship တစ်ခုကို […]